Anticyclone: ​​njirimara, nhazi, ụdị na iche na oke ifufe | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 16/09/2021 13:32 | Ihe gbasara ihu igwe
Na meteorology na climatology, enwere ụfọdụ ihe kpatara mgbanwe dị iche iche yana mgbagharị ụwa. Otu n'ime ha bụ iwu mgbochi. Ọ bụ mpaghara nrụgide dị elu ebe nrụgide ikuku dị elu n'otu mpaghara karịa mpaghara niile gbara ya gburugburu. Antyclone dị oke mkpa maka ihu igwe na ịkọ amụma ihu igwe.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe bụ anticyclone, njirimara ya na otu esi eme ya.
1 Mmetụta ihu igwe nke ụwa
2 Kedu ihe bụ anticyclone
3 Ụdị anticyclone
4 Ọdịiche dị n'etiti anticyclones na oké ifufe
Mmetụta ihu igwe nke ụwa
A na -ekpebi ọtụtụ mgbanwe na mmegharị na ikuku nke ụwa anyị site na mmegharị nke ụwa na njirimara adịghị mma nke elu ụwa. Ikuku nke ụwa na -agbagharị n'ihi mmụba nke ikuku na -ekpo ọkụ nke na -esi na ebe okpomọkụ na -aga n'osisi wee laghachi na equator site n'osisi ruo ikuku oyi. A na -akpọ ikuku nke dị nso n'elu ụwa troposphere, nke nwere ikuku anyị na -eku na ebe ọnọdụ ihu igwe na -ekpebi ihu igwe ụwa na -eme.
Nnukwu ikuku, ikuku nke na -agbagharị n'oké osimiri ụwa, ọ nwere ike nwee mgbanwe anụ ahụ n'oge ọnọdụ ya niile na ihe gburugburu ebe obibi gbara ya gburugburu. Dịka ọmụmaatụ, mgbanwe ndị a nwere ike ịdị na ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ iru mmiri, na dabere na njirimara ikuku, ọ ga -asachapụ karịa ma ọ bụ nọrọ obere ma ọ bụ karịa n'otu mpaghara.
Ntughari nke ụwa na -eme ka ikuku na -aga site na troposphere na -ehulata, ya bụ, ikuku ikuku na -enweta ike nke megharịrị ụzọ ya. Ike a, nke a na -akpọkarị mmetụta Coriolis, pụtara na kọlụm ikuku na -arị elu nke dị na mpaghara ugwu ga -agbakọ n'otu ụzọ elekere (n'aka nri), ebe kọlụm ikuku nke dị n'ebe ugwu na -aga n'ebe ndịda ga -efegharị n'akụkụ na -abụghị (counterclockwise).
Mmetụta a ọ bụghị naanị na -emepụta mmegharị dị oke mkpa na ikuku, ọ na -ewepụtakwa mmegharị dị oke mkpa na mmiri. Mmetụta a na -abawanye mgbe ọ nọ nso na akara akara ụwa, n'ihi na mpaghara ụwa buru ibu yana ọ bụkwa mpaghara kacha dị anya site n'etiti ụwa.
Kedu ihe bụ anticyclone
Otu anticyclone bụ mpaghara oke nrụgide (karịa 1013 Pa) n'ime ya nrụgide ikuku dị elu karịa nrụgide nke ikuku gbara ya gburugburu ma na -abawanye site na mpụta ya na etiti. Ọ nwere ike na -emetụtakarị ihu igwe kwụsiri ike, igwe doro anya, na anwụ.
Kọlụm anticyclone kwụ chịm karịa ikuku gbara ya gburugburu. N'aka nke ya, ikuku nke na -adada ala na -emepụta ihe a na -akpọ imikpu, nke pụtara na ọ na -egbochi oke mmiri ozuzo. N'ezie, a ga -eburu n'uche na ụzọ ikuku na -esi arịda ga -adịgasị iche dabere na mpaghara ebe ọ dị.
Mmiri ikuku anticyclonic ndị a na -adị mfe ịzụlite n'oge ọkọchị, nke na -eme ka oge ọkọchị ka njọ. N'adịghị ka ajọ ifufe, nke dị mfe ịkọ, ha na -enwekarị ọdịdị na akparamagwa. N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ike kewaa anticyclones ụzọ anọ ma ọ bụ otu.
Enwere ụdị anticyclones dị iche iche dabere na njirimara ha. Ka anyị hụ ihe ha bụ:
Pola Atlases nke kọntinent
Atlas n'etiti usoro nke ajọ ifufe
Atlas mepụtara site na mwakpo nke pola ikuku
Nke mbụ bụ atlas subtropical, nsonaazụ ya bụ nnukwu anticyclone dị warara, nke dị na mpaghara subtropical, na -adịkarị nwayọ ma ọ bụ na -agagharị nwayọ. N'ime otu a, ọ bara uru ịkọwa anticyclone nke Azores, nke mechara bụrụ oke mgbochi ike dị oke mkpa, nke na -ahazi ihu igwe mpaghara na oke ifufe nke ga -eme n'oge oge oyi.
Nke abụọ bụ anticyclone akpọrọ Continental Polar Atlas, nke na -akpụpụta ma na -agagharị na kọntinent kacha nso na ugwu n'oge oyi ruo ha na -erute na mmiri na -ekpo ọkụ ma na -etinyekwa onwe ha na ya site na subtyropical anticyclone.
Otu nke atọ nke anticyclones bụ atlas n'etiti usoro ajọ ifufe, ha pere mpe na, dị ka aha ha na -egosi, na -apụta n'etiti ajọ ifufe. Otu ikpeazụ nke anticyclone bụ atlas nke mbanye ikuku pola, dị ka aha ya na -egosi, ikuku oyi na -enweta okpomọkụ site na mmiri dị ọkụ wee gbanwee ka ọ bụrụ anticyclone subtropical ụbọchị ole na ole ka e mesịrị.
Ọdịiche dị n'etiti anticyclones na oké ifufe
Ọ bụ ihe a na -ahụkarị ịmegharị otu anticyclone na oké ifufe ebe a na -akpọkwa oke ifufe. Otú ọ dị, ha dị iche. Iji hụ nnukwu ihe dị iche na ọnọdụ ihu igwe abụọ a, ka anyị hụ ihe nkọwa nke oke mmiri ozuzo.
Oké ifufe bụ ikuku dịtụ iche nke na -ebili. Ọ bụ mpaghara ebe nrụgide ikuku dị ala karịa mpaghara gbara ya gburugburu. Mbuli elu nke ikuku na -akwado ka igwe ojii dị, yabụ, ọ na -amasịkwa mmepụta mmiri ozuzo. N'ikwu eziokwu, ikuku ikuku na -enye ikuku ikuku, oge ha na -adabere na oke ikuku oyi ọ na -eburu. Ụdị ikuku ndị a anaghị akwụ chịm ma na -akpụgharị ma na -aga ngwa ngwa.
N'ebe ugwu ụwa, oke mmiri ozuzo na -agbagharị ihu na ihu aka ekpe. Ihu igwe nke na -ebute ikuku ikuku a anaghị akwụsi ike, igwe ojii, mmiri ozuzo, ma ọ bụ oke mmiri ozuzo, na ụfọdụ oge snow na -ada na oyi. E nwere ọtụtụ ụdị nke oké ifufe:
Kwes: mgbe okpomọkụ dị elu karịa okpomọkụ ụlọ, ikuku na -ebili. N'ihi ikpo oke ọkụ, uzu ọkụ na -eme ihe ike ga -eme, mgbe ahụkwa ntụpọ ga -eme. N'ihi ụdị ajọ ifufe a, oke mmiri ozuzo emela.
Ihe omimi: Ọ na -emepụta ya site n'igwe ikuku nke na -arịgo n'elu troposphere. Mmegharị a bụ n'ihi nrụgide nke ikuku ikuku oyi nwere na agagharị.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe anticyclone bụ na ihe njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Anticyclone: ​​njirimara na ụdị